Hashtags na-aga n'ihu ịnwe nnukwu uru mgbe ejiri ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mgbasa ozi mmekọrịta - ọkachasị ka ojiji ha agbasawanye karịa Twitter na Facebook. Ọ bụrụ na ịchọrọ isi ihe eshtag, lee Hashtag Ntuziaka na anyị bipụtara. I nwekwara ike ịgụ ọkwa anyị na ịchọta ihe kacha mma hashtags maka mmelite mmekọrịta ọ bụla.
Hashtag Trending - ikike ijikwa na nyochaa ọnọdụ na hashtags.
Offọdụ n'ime nyiwe ndị a nwere onwe ha ma nwekwaa ikike, ndị ọzọ ka ewulitere iji rụọ ọrụ iji mee ka mbọ mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-aga n'ihu. Nakwa, ọ bụghị ngwaọrụ ọ bụla na-enyocha usoro mgbasa ozi ọhaneze na ezigbo oge… yabụ ị ga-eme nyocha tupu ị tinye ego na ngwa ọrụ dị ka nke a iji hụ na ị nwetara ihe ị chọrọ!
Igodo - Sochie hashtags, isiokwu, na URL na ezigbo oge. Keyhole si hashtag nchịkọta dashboard zuru ezu, mara mma, ma kesaa!
Twitter Search - ọtụtụ ndị mmadụ na-ele anya na nyocha Twitter iji chọta tweets kachasị na isiokwu, mana ị nwekwara ike iji ya chọta akaụntụ Twitter ịgbaso. Nwere ike pịa ndị mmadụ ma chọpụta ihe ndekọ kachasị maka hashtag ị na-eji. O nwekwara ike ịnye ihe ịchọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na achọpụta ndị asọmpi gị maka hashtag mana ị bụghị.
Tags: Ogbe24chris messinaakụkọ kacha mmahashtag facebookchọta hashtagsakpa hashtaggeochirpgoogle nyochagoogle + hashtagebelataHashtag ngwandozi hashtaghashtag nlekotahashtag nyochahashtag nyocha engineHashtag ngwaọrụhashtagify.mehavehtagshashtag pinterestritetagonye na-ahụ anyaseesawnanị tụrụmmekoritatagbodumkpadotrendmaptweetreachTwitterHashtag twitternyocha twitternyocha twitterTwubs